DERL : Fampahafantarana lalàna sy ireo paikady arahina eny anivon’ny Fitsarana.
Anjaran’ny Distrikan’ny Manjakandriana indray no misitraka ny fidinana ifotony ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy ny Fanavaozana lalàna (Direction des études et des réformes législatives na DERL) ao amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izay tohanan’ny Tetikasa Fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara na PAJMA ary iarahana amin’ny Mpitsara tompon’andraikitra ny sora-piankohonana ao amin’ny Fampanoavana eny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo.
Mandritra ny telo andro no hanatanterahana izany ny 29,30 Septambra ary ny 01 Oktobra 2021 ety amin’ny Institut National de la Jeunesse- Nandihizana Carion,ka iarahana amin’ireo Ben’ny Tanàna ,ireo lefitry ny Ben’ny Tanàna, ireo mpiandraikitra ny sora-piankohonana,ireo Chefs d’Arrondissements ary ireo mponina eto amin’ny Distrikan’ny Manjakandriana.
Ny tanjona amin’izany dia ny fampahafantarana ny lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08/02/2019 momba ny fiankohonana sy ireo paikady ara-pitsarana mikasika izany.Eo ihany koa ny fampahafantarana lalàna momba ny Zaza manao heloka,ny paikady momba ny fisaraham-panambadiana eny anivon’ny Fitsarana,ny lalàna momba ny fananan-tany ,ny lalàna momba ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy(VBG) ary ny fampahafantarana momba ny asan’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana.
Pejy an-tsary : Andro faharoa sady farany ao Mahajanga
Andro faharoa sady farany tamin’ny Andron’ny Lehiben’ny Fitsarana eto Mahajanga, niompana tamin’ny lohahevitra « Fitantanana ny Fitsarana amin’izao vanim-potoanan’ny nomerika haikajy mirindra »
Vonona amin’ny fampiasana ny nomerika ireo Lehiben’ny Fitsarana
Fanamby ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Fitaovana sarobidy hanatrarana ny tanjona tokoa ny fampiasana ny nomerika haikajy mirindra. Nifarana androany Talata 28 Septambra 2021 teto amin’ny Hôtel Coco Lodge eto Mahajanga ny atrikasa fiofanana natao nandritra ny 2 andro, tafiditra anaty fanamarihana ny Andron’ireo Lehiben’ny Fitsarana aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy.
Nisy ihany koa ny fitsidihana sy fanentanana notarihin’ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) Ramatoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy, amin’ny fampiasana ny « logiciel », « Logipénal » ho an’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI), ny « Logiciel Ilo » ho an’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana (TA) ary ny « InfoTF » ho an’ny Fitsarana ara-bola (TF), ho fanafainganana ny asam-pitsarana.
Pejy an-tsary : Roa andro ho an’ny Lehiben’ny Fitsarana tanterahina ao Mahajanga
Fanafainganana ny asam-pitsarana:
Himasoana ny haikajy mirindra
Milofo fatratra amin’ny fanatsarana ny raharaham-pitsarana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, tarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza. Anisany ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Fitaovana ilaina sy manampy indrindra ny fampiasana ny haikajy mirindra.
Nisokatra androany Alatsinainy 27 Septambra 2021 eto amin’ny Hôtel Coco Lodge eto Mahajanga, ny andiany faha-10 amin’ny 2 andro ho an’ny Lehiben’ny Fitsarana (Journées des Chefs de Juridiction – na JCJ). Toy ny tany Toliara tamin’ny fiandohan’ny volana, dia lohahevitra ny hoe: « Fitantanana ny Fitsarana amin’izao vanim-potoanan’ny nomerika na haikajy mirindra ».
Mandray anjara ireo Lehiben’ny Fitsarana eto Mahajanga, sy ireo avy aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy manontolo. Hitohy any Toamasina amin’ny volana ambony ny fanamarihana ny JCJ, sy ny atrikasa fiofanana miaraka aminy.
Pejy an-tsary androany Alatsinainy 27 Septambra 2021: Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra
Fanajana ny fitsipi-pifehezana :
Hentitra ny fampahatsiahivana mikasika ny fanajana ny fitsipi-pifehezana. Anisany amin’izany ny tsy maintsy hanatrehana ny fananganan-tsaina isaky ny Alatsinainy. Eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra isaky ny Alatsinainy antenantenam-bolana, ary eny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy kosa isaky ny Alatsinainy voalohany amin’ny volana.